Covid-19 ပိုး ရှိမရှိ စစ်ဆေးမှု ဘယ်လောက်အရေးပါ
This photo taken on April 9, 2020 showsaCOVID-19 coronavirus antibody test kit at Sophonix,acompany which produces test kits for medical use, in Beijing. - The company is awaiting regulatory approval foraCOVID-19 coronavirus antibody test kit that came out in February. (Pho
Covid-19 Delta variant ပိုး ရှိမရှိ စမ်းသပ်မှုက ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲဆိုတာကို Minnesota ပြည်နယ် ဓါတ်ခွဲခန်းအဏုဇီဝနည်းပညာ ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာဖြူမြတ်သွယ်ကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက် က ဆက်သွယ်မေးမြန်းဆွေးနွေးထားပါတယ်။
မေး ။ ။ မင်္ဂလာပါ ဒေါ်ဖြူမြတ်သွယ်။ အခု မြန်မာပြည်မှာတင်မကဘူး၊ တကမ္ဘာလုံးမှာ Delta ဗီဇပြောင်းတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးသစ်တွေက ပြန့်နေပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကိုဗစ် ပိုးရှိမရှိ စမ်းသပ်တဲ့ testing ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲဆိုတာကို နည်းနည်းလေး အစအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ မင်္ဂလာပါ အန်တီခင်မျိုးသက်။ အခုက Delta က တကမ္ဘာလုံးမှာ ဗမာပြည်အပါအဝင် ပြန့်နေတော့ testing ကလည်း တော်တော်အရေးပါပါတယ်။ ပါတယ်ဆိုတာက ဟိုးအရင်တုန်းကလိုပဲ Delta Variant မျိုးကွဲ ကိုဗစ်ပိုး မပေါ်ခင်ကတည်းက လက္ခဏာ ရှိတဲ့လူတွေကို စစ်သင့်သလို၊ လက္ခဏာ မရှိတဲ့လူတွေကိုလည်း စစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို surveillance လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီလို လူအုပ်စုနှစ်ခုစလုံးကို စစ်တာကိုမှ တော်တော်များများ ထိထိရောက်ရောက် စစ်နိုင်ဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ စစ်တဲ့အခါမှာ ဘယ်လို test စမ်းသပ်မှုမျိုး စစ်သင့်ပါလဲ။
ဖြေ ။ ။ Test က အခုက ဟိုးအရင်တုန်းက ကိုဗစ် စပေါ်ကစကနဲ့ မတူတာကတော့ ပိုပြီးတော့ test တွေ ပိုပြီးတော့ ကျယ်ပြန့်လာတယ်။ test တွေ အရေအတွက်လည်း ပိုများလာသလို option ရွေးချယ်မှုတွေလည်း ပိုရှိလာတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေ တော်တော်များများလည်း (ဆေးဝါး) ထုတ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ အမြန်စစ်တဲ့ test ဆိုတာလည်းရှိတယ်။ အမြန်စစ်တဲ့ test က အခု အမေရိကမှာဆိုရင် အဲဒါကို home test လို့ခေါ်တယ်။ အိမ်မှာ တစ်ယောက်ယောက် နေမကောင်းဘူးဆိုရင်၊ အိမ်မှာစစ်ချင်တယ်ဆိုရင် Over the counter ခေါ်တဲ့ ဆေးဆိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ဆေးခန်းမှာဖြစ်ဖြစ် အဲဒီစစ်တဲ့ဟာကို သွားဝယ်လို့ရတယ်။ အခုတော့ ရန်ကုန်မှာလည်း အဲဒီလိုမျိုးတွေ ရှိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားမှာလည်း အမြန်စစ်တဲ့ test ရှိနေပါပြီ။ နောက်တစ်ခုကြတော့ ဓါတ်ခွဲခန်း (lab) မှာ စစ်တာ။ ဆေးခန်းမှာသွားပြတယ်။ နေမကောင်းဘူး - တုပ်ကွေးဖြစ်ဖြစ်၊ ဖျားနာနည်းနည်းပါးပါး၊ နှားစေးချောင်းဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ် သံသယရှိလို့ သွားပြရင် ဆေးခန်းမှာ ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင် နမူနာယူပြီးတော့ ဆေးခန်းကနေ ဓါတ်ခွဲခန်းတွေကိုပို့တယ်။ ဆေးရုံဓါတ်ခွဲခန်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြင်ပဓါတ်ခွဲခန်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အထူးစစ်ဆေးနိုင်တဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းတွေကို ပို့ပြီးတော့ PCR (polymerase chain reaction) လို့ခေါ်တဲ့ စမ်းသပ်မှု။ အဲဒီစမ်းသပ်မှုမှာလည်း အမြန် PCR ရှိတယ်၊ အနှေး PCR ရှိတယ်။ အဲဒါက ဓါတ်ခွဲခန်းတွေမှာသုံးတဲ့ စက်အမျိုးမျိုးပေါ် မူတည်တာပေါ့။ အမြန်ထွက်တဲ့စက် ရှိတယ်။ အနှေးထွက်တဲ့စက် ရှိတယ်။ အဓိက အဲဒီနှစ်မျိုး - အိမ်မှာစစ်တဲ့ စမ်းသပ်မှု ရှိတယ်။ ဆေးခန်းကနေတဆင့် ဓါတ်ခွဲခန်းမှာစစ်တဲ့ စမ်းသပ်မှု ရှိတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ အိမ်မှာစစ်တဲ့ test တွေက များသောအားဖြင့်က recommendation ထောက်ခံချက်ကတော့ လုံးဝ ရောဂါပိုးလက္ခဏာ ရှိတဲ့လူမှသာ စစ်ဖို့သင့်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လက္ခဏာရှိမှပဲ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးက ကိုယ်ထဲမှာ အများကြီး ရှိနေတယ်။ အဲဒါကို home-test လို့ခေါ်တဲ့ အိမ်မှာစစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမြန်စစ်တဲ့ test က ပိုပြီးတော့ ထိရောက်ချက်ကောင်းတယ်။ အကယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာ home-test နဲ့ စစ်လို့ Negative ဖြစ်တယ်ဆိုရင် များသောအားဖြင့်က ဆရာဝန်ဆီမှာ ဆေးခန်းသွားပြပြီးတော့ PCR test နဲ့ ထပ်ပြီးတော့ စစ်ကြည့်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ အဲဒါမှ ပိုးရှိလား၊ မရှိလားဆိုတာကို ပိုပြီးတော သေချာကြောင်း သိနိုင်တယ်။ အဲဒီလိုမျိုး test တွေ ခွဲထားပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စစ်တဲ့ test-kit လေးတွေ သုံးနေကြပါတယ်။ ဘယ်ဥစ္စာက ပိုစိတ်ချရသလဲ။ ဘယ်လိုမျိုး test-kit က စိတ်ချရသလဲလို့ အမေရိကန်စံချိန်နဲ့ သတ်မှတ်ကြပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ အဲဒါကတော့ ဘယ်ဥစ္စာက test-kit က စိတ်ချရသလဲဆိုတာကတော့ သေသေချာချာတော့ ပြောလို့မရဘူး။ ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကလည်း အခုနောက်ပိုင်း အမျိုိးမျိုးပေါ်လာတယ်။ အဓိကတော့ ဗမာပြည်မှာလည်း test-kit တွေက များသောအားဖြင့် အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်က ထုတ်တာတွေ ရှိကြတယ်။ အဓိက ထုတ်ထားတဲ့ test-kit မှာ ညွန်ကြားချက်လေးတွေ ပါတယ်။ ဘယ်ကျန်းမာရေးဌာနက ထောက်ခံချက်ပေးထားလဲ။ အဲဒီလိုမျိုး အမှတ်အသားလေးတွေကို ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ များသောအားဖြင့်တော့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းက များသောအားဖြင့် ထောက်ခံချက်ပေးထားတာများတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယတို့က ထုတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက ထောက်ခံချက် ရှိမရှိတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ဒီမှာဆိုလဲ ကုမ္ပဏီတွေ အများကြီးလည်း ပေါ်လာတယ်။ အမြန်စစ်တဲ့ test-kit ထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေလည်း အများကြီးရှိလာတယ်။ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကြိုက်သလိုမျိုး သုံးကြတယ်။ ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေတာကတော့ test-kit ကတော့ အိမ်မှာလည်း စစ်တာဆိုတော့ နှာခေါင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲ အတွင်းပိုင်းနည်းနည်းထိုးပြီး နမူနာယူနိုင်တဲ့ဟာကတော့ ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း နမူနာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ အရင်တုန်းကဆိုရင် အတွင်းပိုင်းအထိကိုထိုးပြီးတော့ စံနမူနာယူရတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး test-kit ဆိုရင်တော့ - အိမ်မှာကိုယ်တိုင် test လုပ်တာဆိုရင်တော့ ခက်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိထိရောက်ရောက်ကလည်း အဲဒီလိုမျိုး အတွင်းပိုင်းကို ရောက်တဲ့ဟာက ပိုပြီးတော့ ထိရောက်တယ်။ အဲဒါက ဆရာဝန် ဆေးခန်းတွေမှာ ယူတာကတော့ ပိုကောင်းပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ အခုဆိုလို့ရှိရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးပေးနေပြီ။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသာလူ။ နောက်မထိုးရသေးတဲ့လူ။ ဒီ test လုပ်တဲ့ဟာက ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီသာ လူတွေက test ကို ဘယ်အချိန်မျိုးမှာ လုပ်သင့်သလဲ။ ဒါမှမဟုတ် test မလုပ်ဘဲနဲ့ နေသင့်သလား။ ထားလို့ရသလား။ အဲဒါလေး နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါ။ ကာကွယ်ဆေးနဲ့ test လုပ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့။
ဖြေ ။ ။ အခု ကာကွယ်ဆေးတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထိုးနေကြပြီဆိုတော့ စစ်မယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်ခုရှိတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတော့ နေကောင်းတယ်။ ပုံမှန် ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ ကျန်းကျန်းမာမာပဲဆိုရင် စစ်နိုင်တဲ့။ ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားတဲ့လူ စစ်နိုင်တာက ဘာလဲဆိုတော့ ဒီကာကွယ်ဆေးကနေ ကိုယ်ခံအား တက်လာသလား။ တက်မလာသလား။ ကိုဗစ်ပိုးကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် Anti-body ကို စစ်သင့်တယ်။ အဲဒါက ကာကွယ်ဆေးထိုးတယ်။ နေမကောင်းတာ ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင် ဆေးထိုးပြီး နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက် - နောက်ဆုံးအကြိမ်ထိုးပြီးတဲ့အခါမှာ Anti-body test စစ်လို့ရတယ်။ အဲဒါက ကိုယ်ခံအားကို စစ်ဆေးတာ။ နောက်တစ်ခုက တချို့ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့ လူတွေက တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကလည်း မတူဘူး။ ကိုယ်ခံအားမကောင်းလို့ ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ဖျားသွားတာလည်း ရှိကြတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ စောစောကပြောသလို အမြန် Antigen test ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ PCR test ပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလိုမျိုး သွားစစ်လို့လည်း ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း Anti-body ကိုယ်ခံအားရှိမရှိကိုလည်း စစ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတော့ ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ထိုးပြီးပြီချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်တော်တော်လေးကြာမှ တချို့ တွေလည်း နေမကောင်း ဖြစ်ကြတယ်။ အဲဒီလိုဆို ကိုဗစ် ရှိမရှိကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ အဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ testing လုပ်တာကရော အဆင်ပြေပါ့မလား။
ဖြေ ။ ။ Test လုပ်တာက ဘာအန္တရာယ်မှ မရှိပါဘူး။ ဒီအတိုင်း စံနမူနာကောက်တာဆိုတာလဲ လွယ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ ပိုပြီးတော့ စံနမူနာမျိုးစုံ ကောက်ဖို့အတွက်ကို အခွင့်အရေး ပိုများလာတယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင် နှာခေါင်းအရင်ပိုင်းအထိ ထိုးထည့်ပြီး နမူနာကို ကောက်ရတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ တံတွေး (Saliva) ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပါးစပ်အတွင်းပိုင်း အားခေါင်းအတွင်းပိုင်းကို တို့ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်၊ နောက် ရိုးရိုးနှာခေါင်းအဝလေးမှာဖြစ်ဖြစ် - ပိုပြီးတော့ လူနာတွေ ခံနိုင်ရေသာအောင်လို့ စမ်းသပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ပိုများလာပါတယ်။ အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာတော့ မရှိပါဘူး။ နောက် ကိုယ်ခံအားစစ်တယ်ဆိုရင်လဲ ရိုးရိုးသွေးဖောက်စစ်တာ။ အဲဒါကလဲ အပ်ပေါက်လေး ထိုးတာလောက်ပဲဆိုတော့ အန္တရာယ် ဘာမှမရှိပါဘူး။
ဒေါ်ခင်မျိုးသက် ။ ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Covid-19 Delta variant ပိုး ရှိမရှိ စမျးသပျမှုက ဘယျလောကျအရေးပါသလဲဆိုတာကို Minnesota ပွညျနယျ ဓါတျခှဲခနျးအဏုဇီဝနညျးပညာ ဒါရိုကျတာ ဒေါကျတာဖွူမွတျသှယျကို ဒျေါခငျမြိုးသကျ က ဆကျသှယျမေးမွနျးဆှေးနှေးထားပါတယျ။
မေး ။ ။ မင်ျဂလာပါ ဒျေါဖွူမွတျသှယျ။ အခု မွနျမာပွညျမှာတငျမကဘူး၊ တကမ်ဘာလုံးမှာ Delta ဗီဇပွောငျးတဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈမြိုးသဈတှကေ ပွနျ့နပေါတယျ။ ဒီလိုအခြိနျမြိုးမှာ ကိုဗဈ ပိုးရှိမရှိ စမျးသပျတဲ့ testing ဘယျလောကျအရေးပါသလဲဆိုတာကို နညျးနညျးလေး အစအရငျဆုံးပွောပွပေးပါ။
ဖွေ ။ ။ မင်ျဂလာပါ အနျတီခငျမြိုးသကျ။ အခုက Delta က တကမ်ဘာလုံးမှာ ဗမာပွညျအပါအဝငျ ပွနျ့နတေော့ testing ကလညျး တျောတျောအရေးပါပါတယျ။ ပါတယျဆိုတာက ဟိုးအရငျတုနျးကလိုပဲ Delta Variant မြိုးကှဲ ကိုဗဈပိုး မပျေါခငျကတညျးက လက်ခဏာ ရှိတဲ့လူတှကေို စဈသငျ့သလို၊ လက်ခဏာ မရှိတဲ့လူတှကေိုလညျး စဈပါတယျ။ အဲဒါကို surveillance လို့ ချေါပါတယျ။ အဲဒီလို လူအုပျစုနှဈခုစလုံးကို စဈတာကိုမှ တျောတျောမြားမြား ထိထိရောကျရောကျ စဈနိုငျဖို့က အရမျးအရေးကွီးပါတယျ။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ စဈတဲ့အခါမှာ ဘယျလို test စမျးသပျမှုမြိုး စဈသငျ့ပါလဲ။
ဖွေ ။ ။ Test က အခုက ဟိုးအရငျတုနျးက ကိုဗဈ စပျေါကစကနဲ့ မတူတာကတော့ ပိုပွီးတော့ test တှေ ပိုပွီးတော့ ကယျြပွနျ့လာတယျ။ test တှေ အရအေတှကျလညျး ပိုမြားလာသလို option ရှေးခယျြမှုတှလေညျး ပိုရှိလာတယျ။ ကုမ်ပဏီတှေ တျောတျောမြားမြားလညျး (ဆေးဝါး) ထုတျလာနိုငျတယျဆိုတော့ အမွနျစဈတဲ့ test ဆိုတာလညျးရှိတယျ။ အမွနျစဈတဲ့ test က အခု အမရေိကမှာဆိုရငျ အဲဒါကို home test လို့ချေါတယျ။ အိမျမှာ တဈယောကျယောကျ နမေကောငျးဘူးဆိုရငျ၊ အိမျမှာစဈခငျြတယျဆိုရငျ Over the counter ချေါတဲ့ ဆေးဆိုငျမှာဖွဈဖွဈ၊ ဆေးခနျးမှာဖွဈဖွဈ အဲဒီစဈတဲ့ဟာကို သှားဝယျလို့ရတယျ။ အခုတော့ ရနျကုနျမှာလညျး အဲဒီလိုမြိုးတှေ ရှိတယျ။ မွနျမာနိုငျငံ အနှံ့အပွားမှာလညျး အမွနျစဈတဲ့ test ရှိနပေါပွီ။ နောကျတဈခုကွတော့ ဓါတျခှဲခနျး (lab) မှာ စဈတာ။ ဆေးခနျးမှာသှားပွတယျ။ နမေကောငျးဘူး - တုပျကှေးဖွဈဖွဈ၊ ဖြားနာနညျးနညျးပါးပါး၊ နှားစေးခြောငျးဆိုးပဲဖွဈဖွဈ သံသယရှိလို့ သှားပွရငျ ဆေးခနျးမှာ ဆရာဝနျကိုယျတိုငျ နမူနာယူပွီးတော့ ဆေးခနျးကနေ ဓါတျခှဲခနျးတှကေိုပို့တယျ။ ဆေးရုံဓါတျခှဲခနျးပဲဖွဈဖွဈ၊ ပွငျပဓါတျခှဲခနျးပဲဖွဈဖွဈ၊ အထူးစဈဆေးနိုငျတဲ့ ဓါတျခှဲခနျးတှကေို ပို့ပွီးတော့ PCR (polymerase chain reaction) လို့ချေါတဲ့ စမျးသပျမှု။ အဲဒီစမျးသပျမှုမှာလညျး အမွနျ PCR ရှိတယျ၊ အနှေး PCR ရှိတယျ။ အဲဒါက ဓါတျခှဲခနျးတှမှောသုံးတဲ့ စကျအမြိုးမြိုးပျေါ မူတညျတာပေါ့။ အမွနျထှကျတဲ့စကျ ရှိတယျ။ အနှေးထှကျတဲ့စကျ ရှိတယျ။ အဓိက အဲဒီနှဈမြိုး - အိမျမှာစဈတဲ့ စမျးသပျမှု ရှိတယျ။ ဆေးခနျးကနတေဆငျ့ ဓါတျခှဲခနျးမှာစဈတဲ့ စမျးသပျမှု ရှိတယျ။
နောကျတဈခုကတော့ အိမျမှာစဈတဲ့ test တှကေ မြားသောအားဖွငျ့က recommendation ထောကျခံခကျြကတော့ လုံးဝ ရောဂါပိုးလက်ခဏာ ရှိတဲ့လူမှသာ စဈဖို့သငျ့တယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ လက်ခဏာရှိမှပဲ ဗိုငျးရပျဈပိုးက ကိုယျထဲမှာ အမြားကွီး ရှိနတေယျ။ အဲဒါကို home-test လို့ချေါတဲ့ အိမျမှာစဈတာပဲဖွဈဖွဈ၊ အမွနျစဈတဲ့ test က ပိုပွီးတော့ ထိရောကျခကျြကောငျးတယျ။ အကယျလို့ ကိုယျ့ဘာသာ home-test နဲ့ စဈလို့ Negative ဖွဈတယျဆိုရငျ မြားသောအားဖွငျ့က ဆရာဝနျဆီမှာ ဆေးခနျးသှားပွပွီးတော့ PCR test နဲ့ ထပျပွီးတော့ စဈကွညျ့တာ ပိုကောငျးပါတယျ။ အဲဒါမှ ပိုးရှိလား၊ မရှိလားဆိုတာကို ပိုပွီးတော သခြောကွောငျး သိနိုငျတယျ။ အဲဒီလိုမြိုး test တှေ ခှဲထားပါတယျ။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ မွနျမာပွညျမှာ ကိုယျ့ဘာသာကိုယျ စဈတဲ့ test-kit လေးတှေ သုံးနကွေပါတယျ။ ဘယျဥစ်စာက ပိုစိတျခရြသလဲ။ ဘယျလိုမြိုး test-kit က စိတျခရြသလဲလို့ အမရေိကနျစံခြိနျနဲ့ သတျမှတျကွပါသလဲ။
ဖွေ ။ ။ အဲဒါကတော့ ဘယျဥစ်စာက test-kit က စိတျခရြသလဲဆိုတာကတော့ သသေခြောခြာတော့ ပွောလို့မရဘူး။ ထုတျတဲ့ကုမ်ပဏီတှကေလညျး အခုနောကျပိုငျး အမြိုးမြိုးပျေါလာတယျ။ အဓိကတော့ ဗမာပွညျမှာလညျး test-kit တှကေ မြားသောအားဖွငျ့ အိန်ဒိယနဲ့ တရုတျက ထုတျတာတှေ ရှိကွတယျ။ အဓိက ထုတျထားတဲ့ test-kit မှာ ညှနျကွားခကျြလေးတှေ ပါတယျ။ ဘယျကနျြးမာရေးဌာနက ထောကျခံခကျြပေးထားလဲ။ အဲဒီလိုမြိုး အမှတျအသားလေးတှကေို ကွညျ့လို့ရှိရငျတော့ မြားသောအားဖွငျ့တော့ WHO ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့အစညျးက မြားသောအားဖွငျ့ ထောကျခံခကျြပေးထားတာမြားတယျ။ ဒါပမေဲ့ တရုတျနဲ့ အိန်ဒိယတို့က ထုတျတဲ့ ပစ်စညျးတှကေ ထောကျခံခကျြ ရှိမရှိတော့ မပွောတတျဘူး။ ဒီမှာဆိုလဲ ကုမ်ပဏီတှေ အမြားကွီးလညျး ပျေါလာတယျ။ အမွနျစဈတဲ့ test-kit ထုတျတဲ့ ကုမ်ပဏီတှလေညျး အမြားကွီးရှိလာတယျ။ တဈခုနဲ့တဈခု ကွိုကျသလိုမြိုး သုံးကွတယျ။ ပိုပွီးတော့ အဆငျပွတောကတော့ test-kit ကတော့ အိမျမှာလညျး စဈတာဆိုတော့ နှာခေါငျးပတျဝနျးကငျြကိုပဲ အတှငျးပိုငျးနညျးနညျးထိုးပွီး နမူနာယူနိုငျတဲ့ဟာကတော့ ပိုပွီးတော့ အဆငျပွတောပေါ့။ ကိုယျကိုယျတိုငျလညျး နမူနာယူတဲ့အတှကျကွောငျ့မို့ အရငျတုနျးကဆိုရငျ အတှငျးပိုငျးအထိကိုထိုးပွီးတော့ စံနမူနာယူရတယျ။ အဲဒီလိုမြိုး test-kit ဆိုရငျတော့ - အိမျမှာကိုယျတိုငျ test လုပျတာဆိုရငျတော့ ခကျမယျ။ ဒါပမေဲ့ ထိထိရောကျရောကျကလညျး အဲဒီလိုမြိုး အတှငျးပိုငျးကို ရောကျတဲ့ဟာက ပိုပွီးတော့ ထိရောကျတယျ။ အဲဒါက ဆရာဝနျ ဆေးခနျးတှမှော ယူတာကတော့ ပိုကောငျးပါတယျ။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ အခုဆိုလို့ရှိရငျ မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး ကာကှယျဆေးတှေ ထိုးပေးနပွေီ။ ကာကှယျဆေးထိုးပွီးသာလူ။ နောကျမထိုးရသေးတဲ့လူ။ ဒီ test လုပျတဲ့ဟာက ကာကှယျဆေး ထိုးပွီသာ လူတှကေ test ကို ဘယျအခြိနျမြိုးမှာ လုပျသငျ့သလဲ။ ဒါမှမဟုတျ test မလုပျဘဲနဲ့ နသေငျ့သလား။ ထားလို့ရသလား။ အဲဒါလေး နညျးနညျးရှငျးပွပေးပါ။ ကာကှယျဆေးနဲ့ test လုပျတာနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့။
ဖွေ ။ ။ အခု ကာကှယျဆေးတှကေို ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ထိုးနကွေပွီဆိုတော့ စဈမယျဆိုရငျတော့ နှဈခုရှိတယျ။ ကာကှယျဆေးထိုးပွီးတော့ နကေောငျးတယျ။ ပုံမှနျ ဘာမှမဖွဈဘူး၊ ကနျြးကနျြးမာမာပဲဆိုရငျ စဈနိုငျတဲ့။ ကာကှယျဆေး ထိုးထားတဲ့လူ စဈနိုငျတာက ဘာလဲဆိုတော့ ဒီကာကှယျဆေးကနေ ကိုယျခံအား တကျလာသလား။ တကျမလာသလား။ ကိုဗဈပိုးကို ကာကှယျနိုငျဖို့အတှကျ Anti-body ကို စဈသငျ့တယျ။ အဲဒါက ကာကှယျဆေးထိုးတယျ။ နမေကောငျးတာ ဘာမှမဖွဈဘူးဆိုရငျ ဆေးထိုးပွီး နှဈပတျသုံးပတျလောကျ - နောကျဆုံးအကွိမျထိုးပွီးတဲ့အခါမှာ Anti-body test စဈလို့ရတယျ။ အဲဒါက ကိုယျခံအားကို စဈဆေးတာ။ နောကျတဈခုက တခြို့ကာကှယျဆေးထိုးထားတဲ့ လူတှကေ တဈဦးနဲ့တဈဦးကလညျး မတူဘူး။ ကိုယျခံအားမကောငျးလို့ ကာကှယျဆေးကွောငျ့ ဖြားသှားတာလညျး ရှိကွတယျ။ အဲဒီလိုမြိုးဆိုရငျတော့ စောစောကပွောသလို အမွနျ Antigen test ပဲဖွဈဖွဈ၊ PCR test ပဲဖွဈဖွဈ အဲဒီလိုမြိုး သှားစဈလို့လညျး ရပါတယျ။ နောကျတဈခုက သူတို့ကိုယျတိုငျလညျး Anti-body ကိုယျခံအားရှိမရှိကိုလညျး စဈလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကာကှယျဆေးထိုးပွီးတော့ ဘယျအခြိနျမှာပဲဖွဈဖွဈ ထိုးပွီးပွီခငျြးပဲဖွဈဖွဈ၊ နောကျတျောတျောလေးကွာမှ တခြို့တှလေညျး နမေကောငျး ဖွဈကွတယျ။ အဲဒီလိုဆို ကိုဗဈ ရှိမရှိကို စဈဆေးနိုငျပါတယျ။
မေး ။ ။ အဲဒီလိုအခြိနျမြိုးမှာ testing လုပျတာကရော အဆငျပွပေါ့မလား။
ဖွေ ။ ။ Test လုပျတာက ဘာအန်တရာယျမှ မရှိပါဘူး။ ဒီအတိုငျး စံနမူနာကောကျတာဆိုတာလဲ လှယျပါတယျ။ အခုနောကျပိုငျးဆိုရငျ အနောကျနိုငျငံတှမှောတော့ ပိုပွီးတော့ စံနမူနာမြိုးစုံ ကောကျဖို့အတှကျကို အခှငျ့အရေး ပိုမြားလာတယျ။ အရငျတုနျးကဆိုရငျ နှာခေါငျးအရငျပိုငျးအထိ ထိုးထညျ့ပွီး နမူနာကို ကောကျရတယျ။ အခုနောကျပိုငျးဆိုရငျ အနောကျနိုငျငံတှမှော တံတှေး (Saliva) ကိုပဲဖွဈဖွဈ၊ ပါးစပျအတှငျးပိုငျး အားခေါငျးအတှငျးပိုငျးကို တို့ပွီးတော့ဖွဈဖွဈ၊ နောကျ ရိုးရိုးနှာခေါငျးအဝလေးမှာဖွဈဖွဈ - ပိုပွီးတော့ လူနာတှေ ခံနိုငျရသောအောငျလို့ စမျးသပျနိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေးတှေ ပိုမြားလာပါတယျ။ အန်တရာယျရှိတယျဆိုတာတော့ မရှိပါဘူး။ နောကျ ကိုယျခံအားစဈတယျဆိုရငျလဲ ရိုးရိုးသှေးဖောကျစဈတာ။ အဲဒါကလဲ အပျပေါကျလေး ထိုးတာလောကျပဲဆိုတော့ အန်တရာယျ ဘာမှမရှိပါဘူး။
ဒျေါခငျမြိုးသကျ ။ ။ ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ။